6/29/2014 01:20:00 PM health-news IT-news
6/28/2014 04:46:00 AM IT-news knowledge
6/25/2014 02:00:00 PM IT-news
6/24/2014 06:00:00 PM IT-news Myanmar-news
6/24/2014 12:31:00 PM IT-news
6/24/2014 12:17:00 PM IT-news
6/20/2014 04:57:00 PM IT-news
6/20/2014 11:47:00 AM IT-news
Gmail နှင့် Facebook တို့ကို ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာတွင် မဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်ကဖေးလိုမျိုး နေရာများတွင် log in ပြုလုပ်ပြီး အသုံးပြုကြသူများ အနေဖြင့် account များကို log out ပြုလုပ်ရန် မေ့လျော့သွားသည့်အခါ အခြားသူများက account များကို ထိန်းချုပ်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Google, Facebook နှင့် Twitter တို့ကို log out ပြုလုပ်ရန် မေ့လျော့သွားသည့်အခါ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် log out ပြုလုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
- Gmail ကနေ log out ပြုလုပ်ရန် အတွက် Gmail ကို log in လုပ်ပါ။ စာမျက်နှာ အောက်ဆုံးသို့သွားပြီး “Last account activity” အောက်က “details” link ကို နှိပ်ပါ။
- Window တစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါ “Sign out all other sessions” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
- Facebook account တွင် log in လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် menu bar ညာဘက်ထိပ်နားက Down arrow ကိုနှိပ်ပြီး Settings ကို ရွေးပါ။
- “Security” settings ကိုသွားပြီး “Where you’re logged in” section ကို နှိပ်ပါ။
- Log in ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသည့် ကွန်ပျူတာ၊ တည်နေရာနှင့် အချိန်တို့ကို တွေ့ရမည်။ “End Activity” link ကိုနှိပ်ပြီး log in အားလုံးကို log out ပြုလုပ်နိုင်သည်။
- Dropbox account ကို desktop browser တွင် log in လုပ်ပါ။ - နာမည်၏ အောက်ဘက်ရှိ “Settings” link ကိုနှိပ်ပါ။ - “Security” tab ကို နှိပ်ပါ။ - စာမျက်နှာ အောက်ဘက်သို့သွားပြီး “Sessions” တွင် log in လုပ်ထားသည့် session များကို ရှာပါ။ - အခြား browser တွင် log in လုပ်ထားသည့် Dropbox account ကို log out ပြုလုပ်လိုလျှင် entry ဘေးနားရှိ ကြက်ခြေခတ်ကို နှိပ်ပါ။ Twitter and LinkedIn
Google, Facebook နှင့် မတူညီသည့်အချက်က LinkedIn နှင့် Twitter တွင် အခြား ကွန်ပျူတာများ၌ log in ပြုလုပ်ထားသည့် session များကို အလိုအလျောက် log out လုပ်နိုင်သည့် option မပါဝင်ပေ။ သို့သော်လည်း LinkedIn/Twitter password ကို မည်သည့် browser တွင်မဆို ပြောင်းလဲလိုက်သည့်အခါ active session အားလုံး ပိတ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
6/20/2014 11:28:00 AM IT-news
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ ဖေ့စ်ဘုတ်အသုံးပြုနေသူများ အနေဖြင့် ဇွန်လ ၁၉ရက် နေ့လည် ၂နာရီ ၃၀ခန့်မှ ၂နာရီ ၅၇မိနစ်အထိ နာရီဝက်နီးပါး ဖေ့စ်ဘုတ် Error တက်ကာ အသုံးပြု၍ မရ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ မကဘဲ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်လည်း တပြိုင်နက် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်တည်ထောင်သူအနေဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲများ ပြုပြင်သည့် အခါတွင်လည်း ခေတ္တ ပျက်တောက်မှု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အိုင်တီ ကျွမ်းကျင်သူ အချို့က ဆိုသည်။
ဖေ့စ်ဘုတ်အသုံးပြုမှု ပြတ်တောက်သွားချိန်တွင် သုံးစွဲသူများအားလုံး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားခဲ့ပြီး Twitterသုံးသူတို့၏ စာမျက်နှာတွင် ဖေ့စ်ဘုတ်ပြတ်တောက်သည့် သတင်းက
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖေ့စ်ဘုတ်အသုံးပြုသူမှာ ၂၀၁၃ခုနှစ်အထိ ၁ဒသမ ၁ဘီလီယံရှိသည်။
6/19/2014 03:27:00 PM IT-news
နေရာက အမေရိကမှပါ။ T-Mobile လို့ခေါ်တဲ့ ဥရောပတိုက် အတွင်းရှိ ဆယ်လူလာ အခြေခံကာ တယ်လီကွန်မြူနစ် ကေရှင်တွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကပါ။ ထို ကုမ္ပဏီဟာ သင့်ကို ဖောက်သည် ဖြစ်စေချင်ကာ မားကတ်တင်း ဆင်တဲ့ သဘောမျိုး ဖောက်သည်ရှာတဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ နက်ဝပ်ကို စမ်းသပ်မူတွေ ပြုလုပ်စေလို့ကာ iPhone 5S ကို တစ်ပတ်ဌားတဲ့ သဘောပါ။ ဒီအတိုင်း နက်ဝပ်ကို မျက်ကန်း ပုံစံမျိုးဖြစ် သုံးစွဲချင်မှ ရှောင်ရှားစေလို့တဲ့ အနေအထားကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဟန်းဆက်ကိုဆိုတာထက် ဖုန်းလိုင်းကို သုံးစေလို့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မ၀ယ်ခင် စမ်းသုံးစေကာ Apple ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် ဟန်းဆက်ကို တစ်ပတ်တိတိ သုံးပြီး ပြန်ပေးရပါမယ်။ ဒီအတွက် သူတို့ T-mobile ၇ဲ့ ၀က်ဒ်ဆိုက်မှာ sign up လုပ်ပြီး ဒေါ်လာ ၇၀၀ အနည်းဆုံးရှိတဲ့ သင့်ရဲ့ ခရစ်ဒစ်ကဒ်ကို သူတို့က အပေါင် သဘောမျိုးနဲ့ထားရမှာပါ။ ဒီအတိုင်းတော့ မရပါဘူး။ US အတွင်းမှာ ကြိုက်သလောက် ဖုန်းပြောနိင်၊ မတ်ဆေ့ပို့နိင် ၊ စတာတွေကို လုပ်နိင်ပါတယ်။ ၂ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ သင့်ကို သူတို့က စမ်းသပ်မူက ဘယ်လိုလဲ ဘာလဲလို့မေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေစို၊ Screen ကွဲ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပါ။ ပျောက်သွားရင်တော့ ခရစ်ဒစ်ကဒ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဒေါ်လာ ၇၀၀ လုံး" ပလုံ" ပါမယ်။ ဒီလို ၀န်ဆောင်မူမျိုးက ပထမဦးဆုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမတိုင်ခင် Verizon တို့လည်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
6/18/2014 08:52:00 PM IT-news Myanmar-news
မတ်ခ်ဇူကာဘတ်အမည်ဖြင့် Facebook Page ခိုးသူများအား သတိထားရန် - (ဖတ်ရှု မျှဝေ ပေးရန်)
6/18/2014 10:52:00 AM IT-news
ဒီမနက်လေးတင် ရိုးရာလေး Facebook Page ရဲ့ Message Box ထဲမှာ အောက်ပါ စာလေးကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။
ပေးပို့သူရဲ့ Facebook အကောင့် အမည်က Mark Zurkerberg ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင့် Link ကတော့ https://www.facebook.com/beqiri.tkushiဖစ်ပါတယ်။ သူရေးထားတဲ့ စာကလည်း ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင် ယုံချင်စရာ ပါပဲ။
We have reviewed the suspendion of your pages, After reviewing your page activity, it was determined that you were in violation of our Terms of Service. We have providedawarning to you via email, but you have not responded to our notification. Therefore, your account might be permanently suspended. If you think this isamistake, please verify your account on the link below. This would indicate that your Page does not haveaviolation on our Terms of Service. We will immediately review your account activity, and we will notify you again via email. Verify your account at the link: ---------------------------------------------
Facebook Team will not be responsible if your account disabled, because we have been providing information to you.
Thank you, Facebook Team
အဲ့လို စာတွေ ဖတ်ပြီးရင် Link ထဲ မဝင်လိုက်ပါနဲ့။ Link ထဲ ဝင်နိုင် ပါတယ်။ မိမိ အကောင့်ရဲ့ အမည်တွေ၊ Information တွေ၊ သွာ မရိုက်ထည့် မိ ပါစေနဲ့။ သူက Password တွေလည်း တောင်းပါတယ်။ အကယ်၍ အားလုံး ရိုက်ထည့် မိပြီးရင် မိမိရဲ့ Personal Account ကော၊ Facebook Page တွေကိုရော ဝါးမြိုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တကယ် Facebook က ပေးပို့တာ မဟုတ်ပဲ ဟက်ကာများက ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ ပေးပို့ တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး သတိထားဖို့ အတွက် ဒီ သတင်းကို share ပေးရန် လိုအပ် ပါတယ်။
6/17/2014 08:25:00 PM IT-news
အော်ရီဒူးမြန်မာ၏ IdeaBox အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူများ Microsoft လိုင်စင်ဆော့ဖ်ဝဲများ အခမဲ့သုံးခွင့်ရမည်
6/17/2014 08:19:00 PM IT-news Myanmar-news
အော်ရီဒူးမြန်မာမှ ဆောင်ရွက်ထားသော IdeaBox အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သူများ Microsoft လိုင်စင်ဆော့ဖ်ဝဲများ အခမဲ့သုံးခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း IdeaBox မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။ Microsoft ၏ DreamSpark နှင့် BizSpark အစီအစဉ်များကို IdeaBox အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သူများ အားလုံးအသုံးပြုခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
“Microsoft အနေနဲ့ Developer အကောင့်တွေကိုတစ်နှစ်အခမဲ့ ပေးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ Developerနဲ့ ဒီဇိုင်နာတွေအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေကိုလည်း Microsoft က IdeaBox နဲ့ပူးတွဲစီစဉ်ထားပါတယ်”ဟု ယင်းတာဝန်ရှိသူကပြောကြားသည်။
IdeaBox အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုအများစုကို Microsoft ကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ လက်ရှိသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်၍ Microsoft လိုင်စင်ဆော့ဖ်ဝဲများ အခမဲ့ပေးသုံးခြင်းအစီအစဉ်ကို ယခုလအတွင်းစတင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကိုလည်း Microsoft က IdeaBox တို့ပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်းသိရသည်။
6/17/2014 07:29:00 PM IT-news
6/17/2014 10:50:00 AM IT-news
6/17/2014 10:49:00 AM IT-news sport-news
ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲ အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သော ဘောလုံးအသင်းများ၏စတစ်ကာရုပ်ပြောင်လေးများကို အခမဲ့ရယူနိုင်ရန် ဖန်တီးပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း Viber က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
‘‘ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်တွေနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ် လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအချင်းချင်း လွတ်လပ်စွာအပျော်တွေကိုဖြန့်ဝေခံစားနိုင်ဖို့ Viber က အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပံ့ပိုးတဲ့ သဘောပါပဲ’’ဟုViber ၏ ထုတ်ကုန်ကိုယ်စားပြုအကြီးအကဲ Michael Shmilov ကပြောသည်။
Viber က ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သောနိုင်ငံ၃၂ နိုင်ငံ၏ဘာသာစကားနှင့် ယင်းတို့၏အလံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ရုပ်ပြောင်စတစ်ကာများကို ပြုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါစတစ်ကာများအနက် အချို့ကိုအခမဲ့ရယူနိုင်ပြီး အချို့ကိုငွေကြေးဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Viber သည် မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုအသုံးပြု၍ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်(သို့မဟုတ်)ဝိုင်ဖိုင်ရှိရုံဖြင့် စာတိုများပေးပို့ခြင်း၊ဖုန်းခေါ်ဆို ခြင်း၊ အသံ Message များပေးပို့ခြင်း၊ ရုပ်ပြောင်စတစ်ကာများ၊ ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုများ အပြန်အလှန် ပေးပို့နိုင်ခြင်းနှင့် တည်နေရာများ မျှဝေခြင်းတို့ကိုအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတကာတွင်သာမက မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပါ လူအများစုအသုံးပြုလျက်ရှိသော ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံမှ Viber ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုသူဦးရေမှာ သန်း ၃၀၀ ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
6/16/2014 11:17:00 AM IT-news